Harry Redknapp: Raheem Sterling Nasiib ayuu u helay Liverpool
HomeEnglandHarry Redknapp: Raheem Sterling Nasiib ayuu u helay Liverpool
Harry Redknapp ayaa talo muhiim ah siiyey weeraryahanka da’da yare e Raheem Sterling kaas oo la hadal hayo in uu ka tegayo Anfield markii uu diiday in uu heshiiska u cusboonaysiiyo naadigaas.
Tababare Harry Redknapp ayaa u sheegay Raheem Sterliing in uu sida ugu dhakhsaha badan u saxeexo heshiis cusub.
Da’yarkan ree Ingiriis ayaa shuruud ku xidhay wada hadallo ay kooxdiisu dooneysay in ay la bilowdo kaas oo uu sheegay in uu kooxda la fadhiisan karo kaliya marka la ogolaado in mushahar loo siiyo toddobaadkii lacag dhan £100,000.
“ma aha in la sugo illaa dhamaadka xili ciyaareedka, sida uu noo xaqiijiyey wakiilka Raheem. Waxa aan ku celinayaa mar kale in halkan (Liverpool) ay tahay meesha ugu wanaagsan ee uu ku horumarin karo xirfaddiisa, waanay caddahay.” Sidaas waxa dhowaan yidhi tababaraha Liverpool ee Rodgers.
Waxa isaguna markiisa hadlay tababaraha ruug caddaaga ah ee Rednapp, waxaanu ku adkaystay in 20 jirkan uu nasiib u helay in uu ciyaaro koox la mid ah Liverpool.
Isaga oo u warramayey talksports, ayuu Redknapp ku tiraabay: “Waa in aad heshiiskaaga saxeexo. Waxa aad joogtaa koox wanaagsan oo aad si joogto ah ugu ciyaarayso, waxa aad ka mid noqotay xulka qaranka England, ciyaartana waad baranaysaa.” Sidaas ayuu yidhi Redknapp oo la hadlayay Raheem Sterling.
“Waa in laba ama sadddex sannadood oo kale aad u sii ciyaarto, horumari ciyaartaada waxa aad heli doontaa abaalmarinteeda.” Ayuu mar kale yidhi Redknapp.
Tababarahan ruug caddaaga ahi waxa uu u sheegay Raheem in lacagta badan ee uu doonayo ay iska iman doonto haddii uu xirfaddiisa dhiso oo uu saddex sannadood oo kale sii joogo naadigiisa.
Waxa uu u sheegay in uu joogo mid ka mid ah naadiyada dunida ugu wanaagsan, nasiibna ay tahay in loo ciyaaro koox sida Liverpool ah.
Celtic 1-1 Rangers – All Goals & Highlights
12/03/2017 Abdiwahab Ahmed
Zidane Oo Diiday Inuu Tababare Ka Noqdo Real Madrid
23/11/2015 Abdiwahab Ahmed